"Mothman" Hita any Chicago O'Hare avy amin'ny USPS Airport Worker
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly “Mothman” Hita any Chicago O'Hare avy amin'ny USPS Airport Worker
by Timothy Rawles Oktobra 19, 2020
by Timothy Rawles Oktobra 19, 2020 11,498 hevitra
Ny Singular Fortean Society, famoaham-baovao paranormal izay “mampifandray ny elanelana amin'ny fisalasalana sy ny finoana”, dia nitatitra fa nisy veteranin'ny Sampan-draharahan'ny paositra amerikana 15 taona nifanena tamina zava-manan'aina lava sy mena ary manana elatra taorian'ny asany tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena O'Hare any Chicago tamin'ny faran'ny volana lasa teo.
Ny mpiasa dia nifandray tamin'i Manuel Navarette an'ny UFO Clearinghouse hitantara ny tantarany.
Raha fintinina, nilaza ilay vavolombelona fa nandeha an-keriny tany amin'ny fiarany hariva be izy rehefa avy nifindra ela be ary nahita lehilahy lehibe nanao palitao goavambe nanomboka tany aminy avy eny amin'ny aloka. Tsy lehilahy ihany izany — ary tsy palitao izany.
Andao hohenointsika milaza azy ity:
“Vao avy niasa tao amin'ny USPS Sorting Facility tao amin'ny seranam-piaramanidina O'Hare aho tamin'ny 11 ora alina tamin'ny Alakamisy 00 septambra ary nivoaka nankany amin'ny fiarako aho nahita zavatra nijoro teo amin'ny faran'ny fijanonan'ny fijanonana [parking] izay toerana ijanonako matetika. Tamin'ny voalohany dia nieritreritra aho fa olona lava be io miaraka amin'ny palitao lava. Rehefa nanakaiky ny fiarako aho dia nanokatra ny fiarako, izay nahatonga ny jiro fanaoko. Ny jiro nataoko dia nandona ilay olona nijoro teo amin'ny 24 ka hatramin'ny 20 metatra miala ny fiarako ka nahatonga azy io hihodina ary hijery tsara ahy.
Hitako fa tsy olona ity fa [zavaboary] mena maso, ary ilay toa palitao dia tena elatra nivelatra rehefa nitodika nijery ahy izy. Tamin'ny voalohany dia nieritreritra aho fa karazam-borona tena lehibe dia lehibe izy io, saingy mbola tsy nahita vorona nijoro efa ho fito metatra ny halavany. Izaho dia 5'4 ″ ary ity zavatra ity dia toa lava kokoa noho izaho tamin'ny tongotra roa farafaharatsiny. Nanomboka nanao karazana feo mikarokaroka ity zavatra ity avy eo, efa ho antsasaky ny antsasaky ny antsasaky ny antsasaky ny tsindry toa ny olona iray no nanindry ny lelany fa haingana be kokoa. Avy eo dia nanao karazana feon-dakilasy ary nanomboka nihazakazaka nanatona ahy, tonga teo amin'ny 10 metatra amiko izy io ary niainga nankeny amin'ny habakabaka ary nanidina teo amboniko.
Nikiakiaka tamim-pihetseham-po aho rehefa niondrika teo ambadiky ny varavarana misokatra ny fiara ary nisitrika ny lohan'ny fiara aho aloha. Natahotra mafy aho rehefa nanandrana nanangana ny fiara, nanidy sy nanidy ny varavarana ary nampirehitra ny jiro tao anatiny. Nanomboka ny fiarako aho ary niainga avy teo amin'ny parking ary nanidina teny an-dalana mandra-pahatongako teo amin'ny làlambe. Tonga tany an-trano aho ary nilaza tamin'ny vadiko izay miasa ihany ao amin'io toerana io ihany ary izy no nilaza tamiko ny fahitana an'ity zavatra ity. Natahotra tsy nisy fotony aho ary nanantena fa tsy hahita ity zavatra ity intsony. Mandehandeha manodidina ity faritra ity ity zavatra ity, mampitahotra olona hatramin'ny antsasaky ny fahafatesany. Manantena aho fa hanapa-kevitra ny mponina amin'ny seranam-piaramanidina hanao zavatra momba an'io zavatra io indray andro any. ”
Na dia sarotra aza ny milaza ny zavatra hitan'ny mpiasan'ny USPS tamin'io alina io, dia toa nitovy tamin'ny Mothman ilay izy.
Ho an'ireo tsy mahalala ny angano Mothman dia nanomboka tamin'ny faramparan'ny taona 60 tany Point Pleasant West Virginia manodidina ny 500 kilaometatra miala an'i Chicago. Vavolombelona maro no nahita zavatra lehibe sy toy ny olombelona manidina eny amin'ny lanitra. Ny iray dia nilazalaza azy ho "vorona lehibe manana maso mena," ary ny iray kosa nilaza fa toy ny "lehilahy manidina lehibe manana elatra folo metatra" izy.
Richard Gere: "Ny faminaniana momba ny mothman"
Herintaona mahery taorian'ny fahitana voalohany ilay zava-manan'aina, tamin'ny Desambra 1967, dia nianjera ny Tetezana Silver teo an-toerana namono olona 46 nandritra ny fidinana an-tsehatra hariva. Nanomboka tamin'izay, ny Mothman dia nanjary angano cryptozoolojika, iray izay nanentana ny tantara an-tsary, fanadihadiana, ary koa a horonantsary Hollywood blockbuster nilalao Richard Gere.
Richie Diesterheft avy any Santa Barbara, CA, Etazonia
Ny mpiasan'ny USPS ao amin'ny Chicago O'Hare dia nanontanian'i Navarette raha toa ilay zavatra hitany toa ny zavatra notaterin'ny media sy ny nalehany raha vao nandositra izy io. Nilaza i Navarette fa: “Tsy niraharaha izay niavian'izy io ary tsy hijanona hahafantatra izy.”
Nisy fitomboana indray ny fahitana an'i "Mothman" nandritra izay taona vitsivitsy lasa izay tao amin'ny Lake Michigan sy ny manodidina. Raha ny marina, araka ny Ny Singular Fortean Society, nisy ny tatitra isaky ny fanjakana manamorona ny Great Lake.
Azonao atao ny mamaky ny tantara feno momba ny mpiasa USPS ETO.
WHS: Channel 8
LOHAHEVITRA FITIAVANA / FANORENANA: Sam Shearon